द्रुत तथ्यहरू: एसईओ-Copywriting के हो
इन्टरनेट, खोज इन्जिन अनुकूलन
तपाईं के आधार जवाफ इन्टरनेट खोज इन्जिन मा लाइनमा छक्क परे छ? यसलाई तिनीहरू अनियमित मा जारी छन् जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो छैन। साइटबाट आय उत्पन्न गर्न मान्छे को सबै भन्दा ठूलो सम्भव नम्बर द्वारा भ्रमण गर्न आवश्यक र साइटमा लिंक पहिलो खोज एक प्रदान गरिएको थियो।
एसईओ Copywriting के हो र यसको लागि के हो?
त्यहाँ एसईओ Copywriting रूपमा यस्तो कुरा हो, र लेख रूपमा खोज इन्जिन गर्न प्रयोगकर्ता द्वारा प्रस्तावित साइटहरु को सूची मा सकेसम्म उच्च थियो लेख्न गर्न आवश्यक छ। एसईओ Copywriting - (- एसईओ - खोज इन्जिन लागि अनुकूलन को अंग्रेजी खोज इन्जिन अनुकूलन देखि) अनुकूलित लेख लेख्न छ। अनुकूलन कीवर्डहरू तिनीहरूले सतह अपनाउँछन् र एक स्वचालित खोज बाहिर खींचती जो लागि हुक छन् पाठमा राख्दै मा हुन्छन्। तपाईं कसरी इन्टरनेटमा धेरै कमाउने सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एसईओ Copywriting मास्टर छ। हो एसईओ-अनुकूलित पदहरू सधैं पारंपरिक सूचनात्मक लेख भन्दा बढी महंगा छन्।
कीवर्ड लेखको सामग्री बुझ्न गर्न "कुञ्जी" हो, तिनीहरूले concisely लेखिएको सार व्यक्त। कीवर्डहरू प्रयोगकर्ता खोज बक्स मा प्रवेश कस्तो ठ्याक्कै मेल हुनुपर्छ तर एक सुविधा छ। किवर्ड चयन गर्न र बौद्धिक पाठ तिनीहरूलाई समावेश कार्य मुख्य छ।
आफ्नो खोज प्रश्न मा प्रवेश संग सटीक मिलान, तर पनि पर्यायवाची मात्र होइन देखाउन खोज इन्जिन को खुसी प्रवृत्ति। उदाहरणका लागि, हामी Yandex परिचय भने "किन्न टिभी" लाइन, त्यसपछि मुद्दा सामना गरिनेछ पदहरू शब्दहरू समावेश "बिक्री टिभी को।" यसरी, copywriters लिखित छन् भनेर लेख थप पठनीय र रोचक हुन्छन्।
कीवर्डहरू यति सजिलो छैन चयन गर्नुहोस्। प्राविधिक विनिर्देशों को तैयार मा copywriter को द्वारा भने कुञ्जीहरू सूची जारी छैन, तपाईं तथ्याङ्क नेतृत्व कि खोज इन्जिन प्रश्नहरु को सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तर यहाँ एसईओ लेख लेखिएको छ हो, र यो बुझ्न आवश्यक छ।
पाठ अद्वितीय हुनुपर्छ, एक प्रकारको कुनै साहित्यिक चोरी। पाठ एक अद्वितीय विचार समावेश गर्दा पाठ को विशिष्टताको औपचारिक (अर्को शब्दमा मा उपलब्ध लेख को एक retelling) र अर्थ हुन सक्छ। राम्रो पाठ सबै मापदण्ड अनुपम हुन।
पाठ किवर्ड मा राखिएको पर्याप्त मात्रा मा हुन, तर 5% भन्दा गर्नुपर्छ। कुञ्जीहरूको घटना को आवृत्ति भनिन्छ वाकवाकी पाठ। यो किवर्ड, वा सम्पूर्ण पृष्ठ र साइट खोज इन्जिन प्रतिबंध लगान गर्न सक्छन् "यो ज्यादा" महत्त्वपूर्ण छ।
किवर्ड नै फारममा हुन सक्छ - यो पाठ मा एक प्रत्यक्ष प्रविष्टि छ, र वाक्यांश गठन गर्ने संख्या परिवर्तन गर्न विषय, इच्छुक आदि छन्, - प्रविष्टि पतला छ। खोजशब्द अनुपात उल्लेख छ एक्स रूपमा: वाई, wherein एक्स - पतला को घटनाहरू संख्या - एक predetermined फारममा घटनाहरू रेखाहरूको (मामला नम्बर, विचलन), वाई को संख्या।
पाठ हुनुपर्छ सान्दर्भिक छ: यसको विषय, सामग्री र हेडर तार्किक जडान र सुसंगत सारा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
पाठ पनि रोचक र सूचनात्मक र पठनीय हुनुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस् (यो यो अनुच्छेद विभाजित हुनुपर्छ भन्ने हो, समावेश बुलेट सूची, बुँदा बाहिर बोल्ड खडा गर्नुपर्छ)।
एसईओ Copywriting - आय को असली स्रोत र कति तपाईं कमाउन अप तपाईंलाई सम्पूर्ण छ।
साइट भर्नु: विशिष्टताको, originality र सामग्रीको गुणस्तर को मूल्य मा
विनिमय rewriting: सुविधा र सम्भावनाहरू
पदोन्नति वेबसाइट / ब्लग लेख
कारण व्यवहार कारक स्तर सुधार
खोज इन्जिन मा आफ्नो साइट दर्ता - यो आफ्नो पदोन्नति लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ
स्वर्गदूतले crochet बुनाई: सर्किट विस्तृत विवरण
ग्यास विश्लेषक हो ... ग्याँस विश्लेषक: प्रकारहरू, समीक्षाहरू, मूल्यहरू
"एन्ड्रोइड" मा "स्काइप" कसरी स्थापना गर्ने? विस्तृत निर्देशनहरू
मान्छे depriving देखि मलम: नाम। गुलाबी एक व्यक्ति वंचित उपचार गर्न भन्दा: मलम
रूस मा एक हड्डी मज्जा दाता कसरी बन्न?
महान् Ozcelik4* (टर्की / कुसादसी) - फोटो, मूल्य र पर्यटक रूस देखि समीक्षा
Digitalis: चिकित्सकीय गुण र चिकित्सा मा प्रयोग
अभिनेता "ड्राइभ आक्रोशित": फिलिम को प्लट, फिल्म चालक दल
Kaspersky कसरी हटाउने
Viscose (कपडा) - यो के हो? यो के गुण छ?
एक राजनीतिक र कानुनी सिद्धान्त रूपमा शक्तिहरु को जुदाई को सिद्धान्त